Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. संसारभर फैलिँदै छ ३६ घन्टाभित्र ८ करोड मान्छेको ज्यान जान सक्ने विनाशकारी भाइरस – Janata Live
एजेन्सी- संसारसामु एक ठूलो चुनौती आउने भएको छ । यो चुनौती हावामा फैलिने एक विनाशकारी भाइरस हुनेछ, जसले चुनौती दिएको अर्थात् संकेत दिएको ३६ घन्टामा पूरै संसारमा फैलिनेछ ।
विनाशकारी भाइरसको सचेत गराउने संस्था द ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मनिटरिङ बोर्डको नेतृत्व नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री वा डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. ग्रो हार्लेम बुन्डल्यान्ड र इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रसका महासचिव अल्हदज अस सायले गरिरहेका छन् । संस्थाद्वारा जारी रिपोर्ट के भनिएको छ भने उनीहरूद्वारा यसअघि जारी गरिएको यो खतरनाक फ्लुको रिपोर्टलाई विश्वका नेताहरूले पूरै बेवास्ता गरेका थिए ।
जिपिएमबीको रिपोर्ट जिपिएमबी रिपोर्टमा के चेतावनी दिइएको छ भने अहिलेसम्मको सबभन्दा विनाशकारी भाइरसले विश्वमा पाँचदेखि आठ करोड मान्छेको ज्यान लिन सक्छ । यो भाइरस सासका कारण हावामा तीव्रसँग फैलिनेछ र महामारीको रूप लिन्छ । यसका कारण संसारको पाँच प्रतिशत अर्थव्यवस्था पनि प्रभावित हुन सक्छ । विश्व यस खतरालाई लिएर तयार छैन् । यसका कारण गरिब देशको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग हुन सक्छ ।
डल्बुएचओले जारी गरेको थियो चेतावनी
यो रिपोर्टमा सिल लगाउँदै डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एडनाम घिबेयियसले सबै देशका सरकारसँग यो खतरासँग जुध्न तयार रहन आह्वान गरेका छन् । उनले भनेका छन् यो मौका हो जब जी–७, जी–२० र जी–७७ मा सहभागी देशले बाँकी विश्वकाका लागि एक उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । हावामा फैलिने भनिएको यो विनाशकारी फ्लुको चेतवानी डब्लुएचओद्वारा यसअघि पनि जारी गरिसकिएको छ ।